साहस उर्जा लिमिटेडले ५५ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने - सगरमाथा साप्ताहिक
साहस उर्जा लिमिटेडले ५५ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने
Published on 2019-06-110Comments
साहस उर्जा लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि रू. ५५ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ ।
नीजि क्षेत्रको लगानीमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना यस कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको हो । कम्पनीको साधारण सभामा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रि वर्षमान पुनले नीजि क्षेत्रको मात्र लगानीमा बनेको यो आयोजनामा सरकारको समेत प्रतिवद्धता रहने बताए ।
‘आगामी दिनमा नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति ल्याउनमा सरकार प्रतिवद्ध छ’,उनले भने, ‘जतिसक्दो विद्युत उत्पादन गर्नुस हामी खरिद गर्नेछौं ।’ कम्पनीका अध्यक्ष हिम प्रसाद पाठकले हालसम्म ६९ जिल्लाबाट करीब ८ हजार जनाले कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको जानकारी गराए ।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा ७७ ओटै जिल्लाका नागरिकलाई समेट्ने उद्धेश्य रहेको भन्दै अध्यक्ष पाठकले हाम्रो योजना राष्ट्रिय योजना बन्नेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे । हालसम्म २५ प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाई छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको साधारण शेयर जारी गर्ने निर्णय यस अघिको साधारण सभाले गरे पनि साधारण शेयर अघि संस्थापक शेयर बाँडफाँट हुनपर्ने व्यवस्थाले जारी गर्न नसकिएको समेत उनले बताए ।
कम्पनीले गत भदौ ७ गते संस्थापकको शेयर बाँडफाँट गरेको थियो । आईपीओ जारी गर्नका लागि विक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआईबिएल क्यापिटल लिमिटेडसँग र क्रेडिट रेटिङका लागि इक्रा नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको कम्पनीको भनाई छ ।
अधिकृत पूँजी रू.३ अर्ब ५० करोड र जारी पूँजी रू. ३ अर्ब रहेको यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । संस्थापकबाट कुल जारी पूँजीको ८१ दशमलव ६७ प्रतिशत चुक्ता भइसकेको छ । बाँकी १८ दशमलव ३३ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुने देखिन्छ । कुल रू. ११ अर्ब ८६ करोड निर्माण लागत रहेको यो आयोजना २०७७ असोज १० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
साताको शेयर बजार ः एक अर्ब ८९ कराडको कारोबार